Nhau - Baker-Polito Administration Yazivisa Mari Yekuvandudza Matekinoroji paMvura Yakachena Mvura
Baker-Polito Administration Inozivisa Mari Yekuvandudza Matekinoroji paMvura Yakachena Mvura
Baker-Polito Administration nhasi yapa $ 759,556 muzvipo zvekutsigira nhanhatu dzekuvandudza kwehunyanzvi kwenzvimbo dzekuchenesa mvura muPlymouth, Hull, Haverhill, Amherst, nePalmer. Mari iyi, yakapihwa kuburikidza neMassachusetts Clean Energy Center's (MassCEC) chirongwa cheWatewater Treatment Pilot, inotsigira matunhu ekurapa mvura yakasviba pachena nezviremera muMassachusetts zvinoratidza hunyanzvi hwekurapa kwemvura yakasviba inoratidza kugona kudzora simba rekuda, kudzoreredza zviwanikwa zvakaita sekupisa, biomass, simba kana mvura, uye / kana mishonga inogadzirisa yakadai senitrogen kana phosphorus.
"Kuchenesa mvura isina tsvina isimba rinoda simba, uye takazvipira kushanda pamwe chete nemaguta nemunharaunda yeCommonwealth kuti titsigire hunyanzvi hwehunyanzvi hunoendesa kunzvimbo dzakachena uye dzinoshanda," akadaro Gavhuna Charlie Baker. "Massachusetts mutungamiri wenyika mune hunyanzvi uye tinotarisira kupa mari kumapurojekiti emvura kubatsira nharaunda kudzikisa kushandiswa kwesimba uye kudzikisa mutengo."
"Kutsigira zvirongwa izvi kunobatsira kufambisira mberi hunyanzvi hwehunyanzvi huchavandudza zvakanyanya nzira dzekuchenesa mvura, inova imwe yevatengi vakakura vemagetsi munharaunda medu," akadaro Lieutenant Gavhuna Karyn Polito. "Hutungamiriri hwedu hunofara kupa rutsigiro rwakakosha kumatunhu kuti avabatsire kusangana nematambudziko ekurapa mvura isina tsvina uye kubatsira Commonwealth kuchengetedza simba."
Mari yezvirongwa izvi inouya kubva kuMassCEC's Renewable Energy Trust iyo yakasikwa neMassachusetts Legislature mu1997 sechikamu chekudzora musika wemagetsi. Iko kuvimba kunopihwa mari nehurongwa-bhenefiti muripo inobhadharwa nevatengi veMassachusetts emagetsi eanoshandisa mari, pamwe nematare emagetsi emaseya akasarudza kutora chikamu muchirongwa.
"Massachusetts yakazvipira kuzadzisa tarisiro yedu yekuderedza gasi yekupisa gasi, uye kushanda nemaguta nemadhorobha ari mudunhu kusimudzira mashandiro ekugadzirisa mvura yemarara kuchatibatsira kuzadzisa zvinangwa izvi," akadaro Secretary Energy and Environmental Affairs Munyori Matthew Beaton. "Iwo mapurojekiti akatsigirwa nechirongwa ichi achabatsira nzira dzekuchenesa mvura tsvina kudzikisa kushandiswa kwesimba uye kuunza zvakanakira nharaunda kumatunhu edu."
"Tinofara kupa nharaunda idzi zviwanikwa zvekutsvaga matekinoroji matsva ayo ese anoderedza mutengo wevatengi uye nekuvandudza kugona kwemagetsi," akadaro CEO weMassCEC Stephen Pike. "Kucheneswa kwemvura yakachena kunomiririra kunetsekana kwevagari vemunharaunda uye zvirongwa izvi zvinopa mhinduro apo zvichibatsira Commonwealth kuvaka pachinzvimbo chayo semutungamiri wenyika mukushandisa simba uye nehunyanzvi hwemvura."
Sector nyanzvi kubva kuMassachusetts department reEnharaunda Dziviriro vakapinda mukuwongorora zvirevo uye vakapa zvekuisa padanho padanho rehunyanzvi riri kukurudzirwa uye kugona simba kwesimba kunogona kuzadzikiswa.
Chirongwa chega chega chiri kupihwa mubatirapakati pemasiparati neanopa teknolojia Chirongwa ichi chakawedzera imwe $ 575,406 mumari kubva kumabasa matanhatu ekuchaira.
Masipala anotevera uye vanopa tekinoroji vakapihwa mari:
Plymouth Municipal Airport uye JDL Kudzivirirwa Kwemamiriro ekunze ($ 150,000) - Iyo mari ichashandiswa kumisikidza, kuongorora, uye kuyera yakaderera-simba membrane membrane yemvura yakasviba yekurapa nzvimbo kunhandare nendege diki yemaguta ekurasa mvura nzvimbo.
Taundi reHull, AQUASIGHT, uye Woodard & Curran ($ 140,627) - Mari iyi ichashandiswa kugadzirisa nekuchengetedza chikuva chehunyanzvi, chinozivikanwa seAPOLLO, icho chinozivisa vashandi vemvura yakasviba nezvenyaya dzekuita uye zviito zvinowedzera kushanda zvakanaka.
Taundi reHaverhill uye AQUASIGHT ($ 150,000) - Mari iyi ichashandiswa kugadzirisa nekuchengetedza huchenjeri hwekunyepedzera APOLLO panzvimbo yekurapa mvura yakasviba muHaverhill.
Guta rePlymouth, Kleinfelder uye Xylem ($ 135,750) - Mari iyi ichashandiswa kutenga nekuisa masensa emagetsi emagetsi akagadzirwa naXylem, ayo anoita senzira yekutanga kudzora kubviswa kwehutano.
Guta reAmherst uye Bhuruu Thermal Corporation ($ 103,179) - Iyo mari ichashandiswa kuisa, kuongorora, uye kutumira mvura yakasviba sosi yekupisa pombi, iyo ichapa inowedzerwazve uye isingachinji kupisa, kutonhora, uye mvura inopisa kuAmherst Wastewater Treatment Plant kubva kunovandudzwa sosi.
Guta rePalmer uye Iyo Mvura Planet Kambani ($ 80,000) - Mari iyi ichashandiswa kuisa nitrogen-based aeration control system pamwe nesampling michina.
"The Merrimack River ndomumwe wedu Commonwealth zvikuru pfuma dzinongoitika uye nharaunda yedu vanofanira kuita zvose zviri musimba rayo kuitira Merrimack kudzivirira kwemakore anouya," akadaro State Senator Diana DiZoglio (D-Methuen). “Mari iyi ichabatsira zvikuru Guta reHaverhill mukutora michina yekusimudzira mashandiro nemabatiro akanaka emvura yetsvina. Kuvandudza zvirimwa zvedu zvekuchenesa mvura idanho rinokosha mukuvimbisa hutano nekuchengeteka kwete kwevagari chete vanoshandisa rwizi kutandara nemitambo, asi kune mhuka dzesango dzinodaidza Merrimack nenzvimbo yayo. "
"Iyi mari kubva kuMassCEC ichabvumira Hull kuona kuti nzvimbo yavo yekuchenesa mvura isina tsvina iri kushanda pasina nyaya dzinoshanda," akadaro Seneta wePatrick Patrick O'Connor (R-Weymouth). "Kuva nharaunda iri mumahombekombe egungwa, zvakakosha kuti masisitimu edu amhanye zvine mutsindo uye zvakachengeteka."
"Tinofara kuti MassCEC yasarudza Haverhill kuti iwane rubatsiro urwu," akadaro Mumiriri weNyika Andy X. Vargas (D-Haverhill).“Tine rombo rakanaka kuva nechikwata chakakura panzvimbo yemvura yakasviba yeHaverhill iyo yakashandisa zvine hungwaru kusimudzira basa reruzhinji. Ndinotenda MassCEC uye ndinotarisira kuramba ndichitsigira zvirongwa zvehurumende izvo zvinowedzera nekuvandudza hupenyu hwevagari vedu. ”
"Commonwealth yeMassachusetts inoenderera mberi ichikoshesa mari uye matekinoroji kusimudzira kunaka kwemvura munzizi dzedu dzese uye nekwavanonwa mvura," akadaro Mumiriri weNyika Linda Dean Campbell (D-Methuen). "Ndinokorokotedza Guta reHaverhill nekushandisa tekinoroji yazvino uye isingadhuri yekuvandudza marapirwo emvura yetsvina uye kuita chinangwa ichi kukoshesa."
"Tinotenda kudyara kweCommonwealth munharaunda yedu kuwedzera kushandiswa kweTekinoroji kwehunyanzvi hwekuita basa, uye pakupedzisira kuchengetedza pamwe nehutano hwezvakatipoteredza," akadaro Mumiriri weNyika Joan Meschino (D-Hingham).
"Hunyanzvi hwekugadzira tekinoroji inovimbisa zvikuru inogona kuvandudza mashandiro uye mashandiro," akadaro Mumiriri weNyika Lenny Mirra (R-West Newbury). "Chero chinhu chatinogona kuita kudzikisa kudiwa kwesimba, pamwe nenitrogen nefosiforo inobuda, chichava chinhu chakakosha kugadzirisa nharaunda yedu."